बूढेसकाल लाग्यो ? यसरी देखिनुस् जवान - Manaslu Post
बूढेसकाल लाग्यो ? यसरी देखिनुस् जवान
Manaslu Post ८ आश्विन २०७६, बुधबार २१:०७ 137 पटक हेरिएको
प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो, मानिस क्रमशः बूढो हुँदै जान्छ । तर, केही उपाय अबलम्बन गर्ने हो भने हामी केही हदसम्म जवान देखिन सक्छौं ।
हाम्रो शरीर र छालामा रहेका कोषिकाहरू पुरानो भएर मर्ने र नयाँ उत्पन्न हुने क्रम जारी रहिरहने गर्छ । नयाँ कोषिका बढी सिर्जना भयो भने छालाको चमक कायम रहन्छ । तसर्थ, छालामा चाउरी नपरोस् भन्नका लागि स्वस्थ र ताजा खाना खाने गर्नुपर्छ, जसले नयाँ कोषिका सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।
यसैगरी छालालाई स्वस्थ र जवान राख्न प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । शरीरमा पानीको मात्रा कम भयो भने छाला रुखो, सुखा र अनाकर्षक बन्न पुग्छ । छालाको सुन्दरतालाई कायम राख्न र उमेर ढल्किँदै गए पनि यसको चमक गुम्न नदिन प्रतिदिन तीनदेखि चार लिटर पानी पिउने गर्नुपर्छ । यसरी पानी पिउँनाले छालालाई खराब गर्ने टक्सिन पसिना तथा पिसाबबाट बाहिर जाने गर्छ ।
अर्को कुरा लगाउने म्वाइस्चराइजिङ क्रिमले छालामा सुखापन आउन दिँदैन र यसको कान्तिलाई कायम राख्छ । जवान देखिने रहर हुनेले म्वाइस्चराइजिङ क्रिम जथाभावी लगाउनु हुँदैन । हातलाई तलबाट माथि गर्दै क्रिम दल्नाले छाला स्वस्थ देखिन्छ ।
हर्बल र ग्रिन टीमा उच्च मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ । यसले छालाको बुढ्यौली घटाउने गर्छ । यदि, कफी पिउने गर्नुभएको छ भने र उमेर घकिँदै जान थालेको छ भने तुरुन्तै हर्बल र ग्रिन टीमा आदत बसाइहाल्नुस् ।
कफी र अन्य क्याफिनयुक्त पेय पदार्थले शरीरलाई डिहाइड्रेट गराउँछ, जसकारण अनुहारको चमक हराउन पुग्छ । साथै, कफी खानाले मानसिक तनावसमेत बढ्छ, जसले छालालाई थप बिगार्ने गर्छ । कफी बढी खानाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । त्यही भएर कफी बढी खाने मानिस चाँडै बुढोजस्तो देखिन थाल्छ, छाला चाउरिन थाल्छ ।
नियमित व्यायाम गर्नाले मानिस जवान देखिन्छ । व्यायाम गर्दा शरीरमा रक्तसञ्चार र श्वासप्रश्वास तीव्र हुन्छ । यसले शरीरका हरेक कोषिकामा पोषक पु¥याउने गर्छ ।
साथै, तीव्र श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार हुँदा शरीरमा अक्सिजनको इन्टेक पनि बढ्न पुग्छ । यसले छालालाई सुखा हुन अथवा यसमा चाउरी पर्न दिँदैन ।
तनाव लिनाले शरीरका विभिन्न कोषिका नष्ट हुन्छन् । यस्ता कोषिका नष्ट भएमा छाला झोल्लिएजस्तो देखिने, दाग देखिने, चाउरी देखिने, छाला रुखासुखा हुने आदि हुन्छ । तसर्थ, ध्यान, योग, जगिङ, गार्डेनिङ, घरपालुवा जनावरसँगको घुलमिल, खेलकुद आदिले मानिसलाई तनावको मात्रा घटाउँछ, जसको सीधा असर पर्छ, छालाको सुन्दरतामा पर्छ ।
मसाज सेन्टरमा गएर मसाज
सधैँ जवान :
दसैं र तिहारमा सुगर
बच्चाकाे लागि भएपनि बचाउँनुसः ब्लड क्यान्सर पिडित फुल बुढामगरले मागिन सहयोग
खड्ग बहादुर पुनलाई कमेडी च्याम्पियन टप ३ मा जिताउनको लागि भोटकाे अपिल
गोल्खाडामा रुकुम पूर्वको सदरमुकाम माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन
गायक, संगीतकार एबं एरेञ्जर लक्षु प्रकाश मल्लले राखे विश्वमै नयाँ किर्तीमान
बाख्रा पालन कसरी गर्ने ? थोरै समय निकालेर पढनुहोस् !
कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा सोमबार फैसला हुने
राष्ट्रपतिद्वारा ३२९ कैदीको कैद मिनाहा
सफाइ पाएपछि महराले भने : स्वाधीनताको रक्षा पहिलो प्राथमिकता
विष्फोटक पदार्थसहित विप्लव कार्यकता पक्राउ
गडुल ध्वज गुरुङ (जिमी)काे मार्मिक गीत के को कोलाहल हो सार्वजिनक
दाजु भाउजु एचआईभी संक्रमित, भाईको परिवारै अपाङ्ग
बुहारीलाई मट्टितेल खन्याएर जलाउन खोज्ने सासु जेल चलान